"Maanu Ogayn" Bruno Fernandes Oo Sheegay Xiddiga Man United Ka Tirsan Ee Uu Aadka Ula Yaabay Xalay & Wixii Lama Filaanka Ku Noqday - Gool24.Net
“Maanu Ogayn” Bruno Fernandes Oo Sheegay Xiddiga Man United Ka Tirsan Ee Uu Aadka Ula Yaabay Xalay & Wixii Lama Filaanka Ku Noqday
Mashiinka khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa ka hadlay sidii uu xalay ula yaabay saaxiibkiisa kooxdaas ee Aaron Wan-Bissaka oo shabaqa kasoo taabtay Newcastle United kulan xiiso badnaa.
Man United ayaa kulankeedii labaad ee Premier League ah xilli ciyaareedkan guuleysatay walow ay qaabkii ugu xumaa ee ugu macquulsanaa ku bilawdeen kaddib markii uu daqiiqadii ugu horreysay Luke Shaw gool iska dhaliyay.
Man United ayaa jawaab deg-deg ah ka bixisay iyadoo uu Harry Maguire gool madax ah ka dhaliyay Magpies kahor intii uusan Wan-Bissaka gool gantaal ah indhaha ku xadin.
Bruno ayaa kulanka kaddib sheegay inaysan ogayn in Wan-Bissaka uu awoodaas laag leeyahay isla markaana ay filayeen inuu kubadda soo hordhigi doono goolka.
Dhinaca kale 26 sano jirka ree Portugal oo markale hadalkiisa ku muujiyay sida uu kabtan qarsoon ugu yahay Red Devils ayaa sheegay inuu ka codsado Wan-Bissaka inuu weerarka tago kulamadu inta ay socdaan.
“(Aad ayaanu u faraxsanayn) sababtoo ah maanu ogayn inuu laagi karo, sidaas darteed anaga way nagu adagtahay inaanu rumaysano inuu dhalin karo sababtoo ah marnaba maanu arag isaga oo kubadda laagaya” ayuu yidhi Fernandes oo kaftan ka sameeyay goolka AWB.
“Laakiin anigu waan u faraxsanahay isaga, isagu wuu u qalmay goolka anaguna markasta midan waanu weydiisanaa isaga, noqo mid niyad-wanaagsan, in badan xerada ganaaxa dhexdeeda tag, isku day oo horumar sababtoo ah waxa uu leeyahay tayooyin sidaas u wanaagsan”